Ankafizo ny fotoam-pialantsasatr'i Raja miaraka amin'ny SandPebblesTours
Odisha - Ny fanjakana Tandrefan'i Inde, dia miaina marina hatrany amin'ny soatoavina sy ny fomban-drazana taloha, & dia fantatra eran-tany manerana izao tontolo izao noho ny kolontsainy manan-danja sy ny fetin'ny fetim-pirenena. Na izany aza, ny fotoana tsara indrindra handraisana ny fanjakana dia rehefa manomboka ny Fetiben'ny Raja malaza. Io no fotoana ahafahana mijery ny fomba amam-panao sy ny kolontsaina amin'ny toerana tsara indrindra.
Ny Festival Raja
"Raja Parba" na "Raja" - Tahaka izany ihany no mitranga. Fety iray malaza nandritra ny telo andro no hita tao Odisha tamin'ny tapaky ny volana Jona. Mieritreritra ny olona fa ny andriamanibavy Meny any an-tanindrazana dia mandalo fotoam-pandrosoana amin'ny andro voalohany 3 amin'ny fetibe, raha ny andro faharoa dia manamarika ny fiandohan'ny volana amin'ny volana Mithuna. Amin'ny fotoanan'ny orana izao.
Avy amin'ny horonantsary sy hira ho an'ny sakafo, mahafinaritra, & bebe kokoa, ny fetibe dia manolotra fifandanjana malemy taloha sy vaovao, ka miteraka zava-mahadomelina ny zavatra atao. Azo antoka fa fialan-tsasatra amin'ny fety no atao any amin'ny ambaratonga hafa.
Mandritra ity fetibe 3 andro ity, ny vehivavy dia miala amin'ny raharaha ao an-tokantranony ary mahazo ny lalao indraindray & ivelan'ny trano. Ny ankizivavy dia tia mankamamy ireo fotoana ireo amin'ny fitazonana zava-baovao avy amin'ny lamaody farany na fanesorana ny Sarees nentim-paharazana miaraka amin'i Agatha eo an-tongony, ary tsy misy olona mandeha tsy misy kodiarana eny an-tany.
Manao ny ankamaroan'izany fahafahana izany
Eny ary indrindra, aza hadinonao ny fahafahana handeha any Odisha mandritra ny Fetiben'ny Raja miaraka amin'ny vato kesika Tour N Travels! Ny fofom-bozaka, Sand Pebbles Tour N Travels manolotra hatramin'ny 10% fihenam-bidy mba hahatonga anao hanana fahatsiarovana tena fety. Miaraka amin'ny fiaramanidina maherin'ny 60 maromaro, dia avelantsika handeha any amin'ny faritra samihafa ao amin'ny fanjakana isika mba hiaina ny fankalazana amin'ireo olon-tiana ao amin'ny tena loko. Ary, tsy misy olona afaka mifanaraka tanteraka amin'ny fiarovana sy ny fampiononan'ny kilasy. Ankafizo ny fotoam-pandihizana, mihira, ary milalao lalao nentim-paharazana amin'ny ampahany amin'i Odisha ary manao zavatra mitranga ho anao amin'ny alàlan'ny serivisinay izahay.
Avelao izahay amin'ny fotoana rehetra amin'ny 91-993.702.7574 na tsidiho ny sandpebblestours.com/raja-utsav-odisha. Mamakia ny dianao ankehitriny ary mankanesa amin'ny dia iray, amin'ny fijerena ireo toerana malaza rehetra ao amin'ny fanjakana.
Tiavo ny fanandramana fialan-tsasatra tsy hay hadinoina amin'ny fisafidianana peta-drindrina iraisam-pirenenan'ny gaza